हामी किन चाडै बुढो हुन्छौ ? चिन्ताले पुर्‍याउँछ चितामा
नेपाल हालखबर १० जेष्ठ २०७६
२०७६ जेठ १० गते : हामी नेपाली कति बर्ष बाँच्छौ ? हामी बाँच्ने सरदर उमेर हो ७० बर्ष । यत्तिका उमेरसम्म हामी कति तन्दुरस्त रहन्छौ ? कति निरोगी रहन्छौ ? कित उर्जावान रहन्छौ ? कति सिर्जनसिल रहन्छौ ? कति गतिशिल रहन्छौ ?
घन्टौं जाम सगरमाथाको चुचुरोमा